NAIROBI, Kenya - Kenya ayaa hor-dhigtay Soomaaliya 3 shuruud, kuwaasoo ay u aragtay xalka xiisada diblumaasiyadeed ee ka dhalatay muranka dhanka badda, kaasoo kiiskiisa uu haatan horyaallo maxkamada Cadaalada Aduunka, ICJ.
Inkastoo qodobadaan aanu ahayn kuwa si rasmi ah uga soo baxay xukuumada Nairobi, hadana warbaahinta maxaliga ah ee wadankaasi ayaa kasoo xigatay mas'uuliyiin ka tirsan dalkaasi.
Qodobada kala ah:
1. Kenya ayaa dooneysa in Somalia ay ka laabato qariirada ay kusoo bandhigtay shirkii London, kaasi oo ay Nairobi aaminsan tahay in uu yahay dhulka lagu muran-san yahay ee xukunka laga sugayo.
Hasa yeeshee, DFS ayaa garabka ku dhufatay sheegashada Kenya, iyada oo tilmaamtay in qariirada ay soo bandhigtay uu ku yaallo dhulkeeda, waxayna dalbatay in aanu laga horudhicin go’aanka maxkamada.
2. Kenya waxay rabtaa in shirkadaha iibsaday xirmooyinka Shidaalka iyo Gaas lagu wargeliyo inaanu goobtaasi lahayn Soomaaliya.
Balse, dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in aanu jirin wax xirmo ah oo ay iibisaday, waxayna ku waanisay Kenya in aanu dhaqdhaqaaq hal dhinac aanu ka sameynin goobta lagu doodsan yahay inta maxkamadu xukun ka ridayso.
3. Kenya ayaa u ol’olaleynaysa in kiiska laga soo wareejiyo maxkamada cadaalada, islamarkaana si is-afgarad ah lagu xaliyo arrintaan.
Laakiin, xukuumada Muqdisho ayaa tilmaamtay in xal looga gaaro arrintaan qaab diblumaasiyadeed ay fashilmeen, ayna dooneyso in lagu kala baxo maxkamada.
Kenya ayaa ku doodeysa in ICJ aanu awood u lahayn in ay xukunto kiiskaan, hasa yeeshee, maxkamada ayaa daboolka ka qaaday in ay u kala dabqaadi karto labada dowldood ee dariska ah, kuwaasi oo isku dhegan.
Farmaajo oo Uhuru kula kulmaya Uganda xilli muran badda sii xoogeysanayo
Afrika 02.03.2019. 12:45
Senator Faroole oo ka hadlay tacliinta iyo shahaadada Puntland 08.08.2020. 23:20
UN-ka oo walaac ka muujiyey isku-dayo uu waddo gudoomiye Mursal 08.08.2020. 19:00
Talyaaniga oo aqbalay malaayiin looga hortagayo fatahaadaha Soomaaliya 08.08.2020. 18:30
Tirada dadka lagu la'yahay qaraxyadii Beirut oo lasoo bandhigay 08.08.2020. 18:05
Kenya Airways oo shaacisay in ay hakisay duulimaadyadda Muqdisho 08.08.2020. 12:20
Qarax culus oo lagu weeraray xero ay leeyihiin ciidanka Soomaaliya 08.08.2020. 10:55